Ndira 23, 2021
Kubva pavatoreswa mhiko yehutungamiri hweAmerica nemusi weChitatu, VaJoe Biden vakatanga kugadzirisa zvinhu zvavanoti zvakakanganiswa nevaimbove mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump.
Muzuva ravo rechipiri semutungamiri weAmerica, uye vachishandisa masimba avo semutungamiri wenyika, kana kuti Executive Order, VaBiden vakasaina magwaro mazhinji, kusanganisira rekuti mapazi ehurumende yavo ape vanhu rubatsiro rwekuti vagare zvakanaka, uye kuvapa mari inobva kuhurumende yekuvabatsira panguva ino yekurwisana ne Covid-19.
Gwaro iri rinokurudzirawo kuchengetedzwa kwevashandi uye kuwedzerwa kwerubatsiro rwezvekudya kumhuri dzinonetseka neavo vakarasikirwa nemabasa.
Hurumende yaVaBiden inotarisira kuti dare reparamende yeAmerica richavhota richibvuma kuti rubatsiro urwu rwuendeswe kuvanhu.
Nemusi weChina, zuva ravo rizere rekutanga vari pachigaro chehutungamiri hweAmerica, VaBiden vakasaina magwaro akawanda, nechinangwa chekuti vadzikise kupararira kweCovid-19 mu America.
VaBiden vakazivisa mapazi avo anobatsira vanhu vari munjodzi kuti atsvake nzvimbo dzichashandiswa mukubaya vanhu nhomba yekuvadzivirira kubva kuCovid-19.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti VaBiden vakashamiswavo kuti hurumende yaVaTrump haina zvizhinji zvayakaita mukurwisa Covid19.